မြို့ပတ်ရထားစီးပွါးရေးဆိုတာ ဘာလဲ: လက္ခဏာများနှင့် အရေးပါမှု | Green Renewables များ
ဒီသဘောတရားကို မင်းအရင်က ကြားဖူးမှာပါ။ သို့သော် တော်တော်များများ မသိကြပါ။ စက်ဝိုင်းစီးပွားရေးဆိုတာဘာလဲ. ဥရောပပါလီမန်သည် ကုန်ကြမ်းများကို ပိုမိုထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပမာဏကို လျှော့ချနိုင်ရန် စက်ဝိုင်းစီးပွားရေးစနစ်ကို ချမှတ်လိုသည်။ စားသုံးမှုအပေါ်အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးသည် ရေရှည်တွင် ရေရှည်တည်တံ့မည်မဟုတ်ကြောင်း သင်သိထားရမည်။
ထို့ကြောင့်၊ မြို့ပတ်ရထားစီးပွါးရေးဟူသည် အဘယ်အရာ၊ ၎င်း၏လက္ခဏာရပ်များနှင့် မည်မျှအရေးကြီးသည်ကို ဤဆောင်းပါးတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ပြောပြပါမည်။
1 EU ၏ အထွေထွေစားသုံးမှုအခြေအနေ
3 မြို့ပတ်ရထားစီးပွားရေးသို့ ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်သည်။
4 3R မှ 7R အထိ
EU ၏ အထွေထွေစားသုံးမှုအခြေအနေ
အီးယူသည် နှစ်စဉ် အမှိုက်တန်ချိန် ၂.၅ ဘီလီယံကျော် ထုတ်ပေးသည်။ ရပ်ရွာအေဂျင်စီများသည် လက်ရှိအမှိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံမှ စစ်မှန်သော မြို့ပတ်ရထားစီးပွားရေးသို့ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကို မြှင့်တင်ရန် ဥပဒေပြုမူဘောင်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် ကြိုးပမ်းနေပါသည်။
2020 ခုနှစ် မတ်လတွင် ဥရောပစိမ်းလန်းရေးသဘောတူညီချက်အရ အဆိုပြုထားသောစက်မှုဗျူဟာအသစ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် ဥရောပကော်မရှင်သည် ပိုမိုရေရှည်တည်တံ့သောထုတ်ကုန်များကိုဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်း၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများလျှော့ချခြင်းနှင့် နိုင်ငံသားများအား စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်းများပါ၀င်သည့် စက်ဝိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်အသစ်ကို အဆိုပြုခဲ့သည်။ (“ပြုပြင်ပိုင်ခွင့်၊ ” ) ။ လျှပ်စစ်နှင့် အိုင်စီတီ၊ ပလတ်စတစ်၊ အထည်အလိပ် သို့မဟုတ် ဆောက်လုပ်ရေးစသည့် အရင်းအမြစ်များ ပေါများသော စက်မှုလုပ်ငန်းများကို အထူးအာရုံစိုက်သည်။
2021 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် လွှတ်တော်မှ မြို့ပတ်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းစီမံချက်ကို မဲခွဲဆုံးဖြတ်ပြီး အောင်မြင်မှု ထပ်မံရရှိရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ 2050 တွင် အပြည့်အဝ စက်ဝိုင်းပုံ၊ ရေရှည်တည်တံ့သော၊ အဆိပ်အတောက်မရှိသော နှင့် ကာဗွန်ကင်းစင်သော စီးပွားရေးစနစ်. ၎င်းတွင် ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုနှင့် စားသုံးမှုတို့ကြောင့် 2030 ခုနှစ်အရောက်တွင် ဂေဟဗေဒခြေရာခြေရာကို လျှော့ချရန်အတွက် ပိုမိုတင်းကျပ်သော ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းဥပဒေများနှင့် စည်းနှောင်ထားသောပစ်မှတ်များ ပါဝင်သင့်သည်။
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများနှင့် ကုန်ကြမ်းအသုံးပြုမှုတွင် ထိရောက်မှု နည်းပါးခြင်းတို့နှင့် ရင်ဆိုင်နေရပြီး မြို့ပတ်ရထားစီးပွါးရေး အယူအဆကို မွေးဖွားလာခဲ့သည်။ မြို့ပတ်ရထားစီးပွါးရေးစနစ်သည် မျှဝေခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ မွမ်းမံခြင်းနှင့် ထုတ်ကုန်တန်ဖိုးများကို တတ်နိုင်သမျှ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းတို့ပါဝင်သည့် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သုံးစွဲမှုပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ထုတ်ကုန်၏ သက်တမ်းကို ရှည်စေသည်။
လက်တွေ့တွင် ဤသည်မှာ အမှိုက်ကို လျှော့နည်းအောင် ဆိုလိုသည်။ ထုတ်ကုန်သည် ၎င်း၏အသုံးဝင်သောအသက်တာသို့ရောက်ရှိသောအခါ၊ သင်၏ပစ္စည်းများသည် စီးပွားရေးတွင် တတ်နိုင်သမျှကြာရှည်နေမည်ဖြစ်သည်။ ဒါတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အပိုတန်ဖိုးကို ဖန်တီးရန် ထပ်ခါတလဲလဲနှင့် ထိထိရောက်ရောက် အသုံးပြုပါ။ ၎င်းသည် စျေးပေါပြီး အလွယ်တကူ လက်လှမ်းမီနိုင်သော ပစ္စည်းများနှင့် စွမ်းအင်များစွာ လိုအပ်သည့် 'စွန့်ပစ်ခြင်း' အယူအဆအပေါ် အခြေခံသည့် ရိုးရာလိုင်းစီးပွားရေးပုံစံနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ အရေးယူရန် တောင်းဆိုသည့် ဥရောပပါလီမန်၏ ခေတ်မမီသော အစီအစဉ်များသည်လည်း ဤပုံစံ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။
မြို့ပတ်ရထားစီးပွားရေးသို့ ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်သည်။
မြို့ပတ်ရထားစီးပွါးရေးသို့ ကူးပြောင်းရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ ကုန်ကြမ်းဝယ်လိုအား တိုးလာခြင်းနှင့် အရင်းအမြစ်များ ရှားပါးလာခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။ အရေးကြီးကုန်ကြမ်းအများအပြားမှာ အကန့်အသတ်ရှိပြီး ကမ္ဘာ့လူဦးရေ တိုးလာသည်နှင့်အမျှ ဝယ်လိုအားလည်း များလာသည်။
အခြားအကြောင်းရင်းမှာ အခြားနိုင်ငံများအပေါ် မှီခိုနေရခြင်းဖြစ်သည်၊ အချို့သော EU နိုင်ငံများသည် ၎င်းတို့၏ ကုန်ကြမ်းအတွက် အခြားနိုင်ငံများအပေါ် မှီခိုနေရပါသည်။ ရာသီဥတုအပေါ် သက်ရောက်မှုသည် အခြားအချက်ဖြစ်သည်။ ကုန်ကြမ်းထုတ်ယူသုံးစွဲမှုတွင် အရေးကြီးသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိုးဆက်များ၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (CO2) ထုတ်လွှတ်မှုကို တိုးမြင့်စေသည်။ကုန်ကြမ်းများကို ထက်မြက်စွာအသုံးပြုခြင်းသည် ညစ်ညမ်းသောဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကို လျှော့ချနိုင်သည်။
အမှိုက်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး၊ ဂေဟစနစ်ဒီဇိုင်းနှင့် ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့သော ဆောင်ရွက်မှုများသည် နှစ်စဉ်ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကို လျှော့ချနိုင်ပြီး အီးယူကုမ္ပဏီများ၏ ငွေကြေးကို သက်သာစေနိုင်သည်။ လက်ရှိတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်အသုံးပြုနေသော ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လွှတ်မှု၏ ၄၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။
ပိုမိုစက်ဝိုင်းစီးပွားရေးစနစ်သို့ ကူးပြောင်းခြင်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဖိအားများကို လျှော့ချခြင်း၊ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်းစသည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ကုန်ကြမ်းထောက်ပံ့မှု၊ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ (GDP ၏ 0,5%) နှင့် အလုပ်အကိုင် (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 700.000 အလုပ်အကိုင်များ ဖန်တီးပေးမည့်)။ 2030 ခုနှစ်တွင် EU ၌သာ)။
၎င်းသည် သုံးစွဲသူများအား ပိုမိုတာရှည်ခံပြီး ဆန်းသစ်သော ထုတ်ကုန်များကို ပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့် ငွေကုန်သက်သာစေပြီး ဘဝအရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းသည် တပ်ဆင်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူပါက၊ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်သည့်ကုန်ကျစရိတ်ကို ထက်ဝက်လျှော့ချနိုင်သည်။
3R မှ 7R အထိ
လူသိများသော 3Rs -Reduce, Reuse and Recycle- သက်ရောက်မှုကို နည်းပါးစေပြီး အရင်းအမြစ်များနှင့် စွမ်းအင်ကို ချွေတာပါသည်။ ဒါပေမယ့် ဒီဇိုင်းကိုယ်တိုင်က ထုတ်ကုန်ကို ပိုပြီး ရေရှည်တည်တံ့အောင် မလုပ်တာလဲ။ ဒါမှမဟုတ် အသစ်ဝယ်မယ့်အစား ဘာကြောင့် မပြုပြင်တာလဲ။ မြို့ပတ်ရထားစီးပွါးရေးသည် ကွင်းဆက်အတွင်း ဂေဟစနစ်ဒီဇိုင်းနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းကဲ့သို့သော အခြားသဘောတရားများကို မိတ်ဆက်ပေးသည်၊ ဤ 3Rs များကို 7Rs အထိ တိုးချဲ့သည်။ ဒီ 7Rs တွေက ဘာတွေလဲဆိုတာ အသေးစိတ်ကြည့်ရအောင်။
ပြန်လည်ဒီဇိုင်းဆွဲပါ။: eco-design ကိုအခြေခံ၍ ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထည့်သွင်းပါ။ ဤနည်းဖြင့် ထုတ်ကုန်၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွင် အားသာချက်တစ်ခုသာမက ရေရှည်တည်တံ့မှုလည်းရှိသည်။
လျှော့ချပါ ကျွန်ုပ်တို့သည် အလွန်လျင်မြန်စွာ စားသုံးကြသည်။ ထို့ကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့စားသုံးသည့် ကုန်ပစ္စည်းပမာဏနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို လျှော့ချရမည်ဖြစ်သည်။
ပြန်လည်အသုံးပြု: ၎င်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ထုတ်ကုန်များ၏ အသုံးဝင်သော သက်တမ်းကို တိုးမြှင့်ရန်နှင့် ၎င်းတို့အား လက်ဖြင့် သို့မဟုတ် DIY ဖြင့် သက်တမ်းအသစ် ပေးခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့ကို ပြန်လည်အသုံးပြုရန် ဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ပေါ်တွင်၊ မည်သည့်ထုတ်ကုန်အတွက်မဆို ပြန်သုံးနိုင်သော စိတ်ကူးစိတ်သန်းထောင်ပေါင်းများစွာကို သင်တွေ့လိမ့်မည်။
ပြုပြင်ခြင်း- များစွာသောအခြေအနေများတွင်၊ ထုတ်ကုန်တစ်ခုပျက်ကွက်သောအခါ၊ ၎င်းကိုပြုပြင်ရန်ရွေးချယ်မှုကိုပင်မစဉ်းစားဘဲအသစ်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ဝယ်တတ်သည်။ သို့သော် ပြုပြင်မှုများသည် များသောအားဖြင့် စျေးသက်သာပြီး ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အမြဲပိုကောင်းပါသည်။ ကုန်ကြမ်းများ၊ စွမ်းအင်ကို ချွေတာပြီး စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို လျှော့ချပါ။
သက်တမ်းတိုးရန်- ဤအရာဝတ္ထုဟောင်းများအားလုံးကို မွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ၎င်းတို့ကိုဖန်တီးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ၎င်းတို့ကို ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်စေရန်ဖြစ်သည်။
ပြန်လည်ရယူရန် ၎င်းတွင် အသုံးပြုပြီးသားပစ္စည်းများကို စုဆောင်းခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ၎င်းတို့ကို ပြန်လည်မိတ်ဆက်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။
အမှိုက်ပုံး - အခြားထုတ်ကုန်အသစ်များအတွက် ကုန်ကြမ်းဖြစ်လာစေရန် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုခဲ့သော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်မိတ်ဆက်ခြင်း။ အထက်ပါနည်းလမ်းများအားလုံးကို စမ်းသုံးကြည့်ပြီးပါက နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၊ အကောင်းဆုံးအမှိုက်သည် မထုတ်လုပ်နိုင်သော အမှိုက်ဖြစ်သည်ကို သတိရပါ။
ဤအချက်အလက်ဖြင့် မြို့ပတ်ရထားစီးပွါးရေးဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း၊ ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် ယနေ့ကမ္ဘာကြီးအတွက် အရေးပါမှုတို့အကြောင်း ပိုမိုလေ့လာနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » ပတ်ဝန်းကျင် » မြို့ပတ်ရထားစီးပွါးရေးဆိုတာဘာလဲ
ဖာနန်ဒို schujman ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ မြို့ပတ်ရထားစီးပွါးရေးသည် သီးခြားလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုမှ 360º ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရှုမြင်ချက်မှ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည်- ထုတ်ယူမှု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မြို့ပြ၊ စက်မှုဇုန်၊ ရေကြောင်းသွားလာရေး စသည်တို့ကို ၎င်း၏ ပြင်ပအန္တရာယ်များနှင့် ဆက်စပ်သော ဆင့်ပွားအကျိုးသက်ရောက်မှုများ သို့မဟုတ် အပေါင်ပစ္စည်းများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း ၎င်း၏ အနီးနားနှင့် အစွန်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် ထုတ်လုပ်သည်၊ ယင်းရလဒ်များကို ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် လိုအပ်ပါက ကုသနိုင်ပြီး စကြာဝဠာအတွင်းရှိ ဒြပ်စင်များ၏ အရေးပါသည်ဟု ယူဆထားသော အကျိုးသက်ရောက်မှုများအရ၊ အဖြစ်မှန်ကို နားလည်ရန် လုံး၀နှင့် ပေါင်းစပ်အခြေခံမူများပေါ်တွင် အခြေခံထားပြီး၊ ဖြစ်နိုင်ခြေများစွာနှင့် ဆက်စပ်သော လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စနစ်များအတွင်း ပါဝင်သည့် အစိတ်အပိုင်းများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားပြီး လက်တွေ့ဘဝနှင့် ၎င်း၏ ဒိုင်းနမစ်များကို အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ကျွန်ုပ်တို့အား ပိုမိုသစ္စာရှိသော စိတ်ကူးကို ပေးစွမ်းနိုင်ကာ ဖန်တီးထားသည့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစမ်းသပ်မှုပုံစံကို ကျော်လွန်ကာ၊ တစ်ဆယ့်ကိုးရာစုမှ ယနေ့အထိ ခေတ်ပြိုင်ကမ္ဘာ၏ နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကြီးသည် ဖြစ်နိုင်သော်လည်း ရှုပ်ထွေးသောပြဿနာများ၊ အထူးသဖြင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြဿနာများ၊ လူမှုရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ယဉ်ကျေးမှုနှစ်မျိုးလုံးကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် မလုံလောက်သေးပါ။ ငါတို့အချိန်"
fernando schujman ကို အကြောင်းပြန်ပါ။